5 IVista, eNewquay
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPhil
Nje ukuba ungene kwiplani evulekileyo yendawo yokuhlala ye-5 The Vista uya kutsalwa kwiimbono eziyalelayo kwibala legalufa kwaye uphume uye eFistral Beach. Nje ukuba uyeke ukujonga i-Fistral kwaye uphume uye elwandle, okunokuthi kuthathe ixesha, kungekudala uya kuqaphela ukukhukuliseka kwembonakalo yolwandle kunxweme olujikeleze iNewquay.
Nje ukuba ungene ngaphakathi 5 IVista uya kuziva usekhaya kwangoko kwaye nokuba uyaphumla kwibalcony ukonwabela isiselo sangokuhlwa, okanye ukonwabele isidlo sangokuhlwa kwitafile yokutyela uya kuzifumana ujonge elwandle kungekudala.
5 I-Vista inazo zonke iimod cons kunye nendawo yayo yokuhlala evulekileyo incediswa ngamagumbi okulala amabini athandekayo anamagumbi okuhlambela amabini, okwenza kube yindawo efanelekileyo yokubuyela unxweme kwiintsapho kunye nezibini ngokufanayo.
Ukuba ungazikrazula kude nombono kukho izinto ezinomtsalane kunye nemisebenzi eninzi kanye kumnyango wakho. Ibala legalufa laseNewquay lingaphaya kwendlela kwaye isikolo sokusefa eFistral siphakathi kwezona zibalaseleyo elizweni yeyiphi indawo engcono onokucinga ngayo yokufunda ukusefa.
Vula isicwangciso kunye nekhitshi kunye nendawo yokutyela
Iingcango kwibalcony enezihlalo zangaphandle
Iisofa ezimbini, itafile yekofu, i-intshi ye-50 ye-Smart Tv enesandi esijikelezileyo kunye ne-Apple TV
I-PlayStation 4 enemidlalo kunye nengqokelela yeDVD ebanzi ukuze uyonwabele.
I-Wi-Fi yasimahla iyafumaneka kwiflethi
Vula isicwangciso kunye nendawo yokutyela kunye nekhitshi
Isipheki se-oveni ephindwe kabini, enendawo yokupheka yegesi emithandathu, isitya sokuhlamba izitya, ifriji, isikhenkcezisi kunye nemicrowave
Iwasha yokomisa, intsimbi, ibhodi yoku-ayina kwaye inokufumaneka kwikhabhathi eluncedo
Vula isicwangciso kunye nekhitshi kunye nendawo yokuhlala
Itafile yokutyela enezitulo ezintandathu
Igumbu lokulala elikhulu
Ibhedi ephindwe kabini, iikhabhathi ezisecaleni kwebhedi ezinezibane, kunye newodrophu
I-Flatscreen TV kunye nomdlali weDVD
Igumbi lokulala ezimbini
'Zip kunye nekhonkco' iibhedi ezingamawele ezinokulungiswa njengobukhulu obukhulu bokumkani ukuba uceliwe ngexesha lokubhukisha
I-wardrobe ephindwe kabini kunye neekhabhathi ezisecaleni kwebhedi ezinezibane
Igumbi lokuhlambela loSapho
Ibhafu eneshawa engaphezulu, iWC, isitya sokuhlambela kunye nethawula eshushu
Igumbi lokuhlambela le-En-suite
En suite kwi-Master Bedroom ene-cubicle yeshawa, iWC, isitya sokuhlambela kunye nethawula eshushu.
Ifulethi enokufikelela kwilift
Ukugcinwa kweSufrboard kunye nezixhobo zaselwandle zokusetyenziswa kweendwendwe.
Indawo yokupaka eyabelwe imoto enye, eneendawo zeendwendwe ezikhoyo kodwa aziqinisekiswanga.
KwiPeninsula edumileyo, undwendwe lunokufumana okona kulungileyo kweNewquay kodwa ngaphandle kokuba sembindini wedolophu. Kufuphi neFistral Beach kunye neNewquay Golf course kuninzi onokukwenza ngokufanelekileyo kwinqanaba lomnyango.
Izimvo eziyi-1 243
Nge-imeyile kunye neFowuni